गंगा नदीमा फेला परेको यो माछाबाट बैज्ञानिकहरु हैरान, फैलियो डर ! – Suchana Hub
काठमाडौं । दक्षिण अमेरिकामा पाइने एक माछा गंगा नदीमा फेला परेको छ भने हजारौं किमी टाढा दक्षिण अमेरिकाको अमेजन नदीमा पाउने माछा वाराणसीको गंगा नदीमा भेटिएसँगै भेटीएसँगै वैज्ञानिकहरू चकित परेका छन् ।
माउथ क्याटफिश नामक उक्त माछा मांसाहारी रहेका कारण यसले अन्य माछालाई आफ्नो शिकार बनाएर पर्यावरणलाई पनि खतरामा पार्न सक्ने वैज्ञानिकहरूको धारणा रहेको छ । यसैकारण यो माछा यहाँसम्म आउँनु डरको विषय छ । यसअघि उक्त माछा गंगा नदीमा मात्र नभई भारत र दक्षिण एशियामा पनि कतै फेला परेको थिएन ।
Previous अष्ट्रियामामा यी नेपाली महिलाले किन गरिन् आफ्नै तीन सन्तानको हत्या ?
Next ब्राजिलमा कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिको मृत्यु